बिष्णु माझीको अर्को फोटो किन बन्दैन ? – Namaste Host
March 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिष्णु माझीको अर्को फोटो किन बन्दैन ?
पोखरा/ विष्णु माझीको स्वरमा सजिएको यो गीत युट्युबबाट अहिलेसम्म साढे ५ करोडले हेरिसकेका छन् । लालुमाईमा उनै विष्णु माझी र सन्दीप न्यौपानेको स्वर छ । सो गीतलाई युट्युबमा खोज्नेको संख्या ३ करोड भन्दा बढी देखिन्छ । छिपछिपे पानीमा लेऊ बोलको गीतमा समेत उनै विष्णुको स्वर छ ।